प्रारम्भिक कक्षा पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुको यस्तो सुझाब – सिकाइ खबर- A complete news portal on Education in Nepal
प्रारम्भिक कक्षा पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुको यस्तो सुझाब
काठमाडौं । शब्द पढ्ने र बोध गर्ने बालबालिकाको पठन क्षमता बढाउन प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (इजिआरपी)लाई परियोजनाभन्दा सरकारकै राष्ट्रिय कार्यक्रमको नियन्त्रण रहनेगरी सञ्चालन गर्न विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् ।
यसलाई राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (एनइजिआरपी)भित्र समावेश गर्यो भने मात्र सिकाइ उपलब्धिले गति लिने उनीहरुको धारणा छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार आयोजित ‘प्रारम्भिक कक्षा पढाइः लगानी र उपलब्धि’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रम शिक्षाबारमा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले भने, ‘परियोजनालाई लामो अवधिमा नलगी राष्ट्रिय प्रणालीमा लैजानु पर्थ्यो । एकपछि अर्काे प्रोजेक्ट आइदियो ।’ उनले प्रोजेक्ट सानो स्केलमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम आइदिएको भए उपलब्धि पनि अहिलेको भन्दा बढी आउँनेथ्यो भने ।
‘प्रोजेक्टले नियन्त्रणमुखी वातावरण बनाउँछ । यसले उपलब्धिमा असर पार्छ,’ डा. कार्कीको भनाइ छ, ‘शुरुमै प्रोजेक्ट कार्यान्वयन थालिएकाले राष्ट्रिय कार्यक्रमले एउटा र इजिआरपी प्रोजेक्टले अर्काे इन्ट्रेस्ट बोकेर गएको देखियो ।’ डा. कार्कीले मातृभाषामा भन्दा पनि नेपालीमा शुरुदेखि नै गरेको भए मैथिली, भोजपुरीलगायतमा सजिलो पथ्र्याे भने । ‘शुरुदेखि गति नबढ्नु यो पनि एउटा कारण हो,’ उनले भने । प्रारम्भिक कक्षा पढाइमा अझैपनि नेपाल शुरुकै चरणमा रहेको अझ १५ वर्ष यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
इजिआरपी युएसआइडीका कार्यक्रम निर्देशक नारायणकृष्ण श्रेष्ठले परियोजनाले नै मोडल बनाउने हो भन्दै प्रोजेक्ट परीक्षणबाट इजिआरपी राष्ट्रिय आवश्यकताको कार्यक्रम भएको बताए । उनले सरकारले मात्र पूर्ण रुपमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले भार पर्ने भन्दै सघन कार्यक्रम गरेर नतिजा ल्याउन आफूहरु सक्रिय रहेको प्रष्ट्याउनुुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका र नभएका जिल्लाबीचको तुलना गर्दै २० जिल्लामा अध्ययन गरिएको थियो । परियोजना सञ्चालित स्थानमा एक शब्द मात्र पढ्न सक्ने मातृभाषा नेपाली भएका विद्यार्थीको प्रतिशत ५२ बाट बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
यस्तै, एक शब्द मात्र पढ्न सक्ने नेपाली मातृभाषा नभएका विद्यार्थी ३० प्रतिशत थिए । त्यो बढेर ४३ प्रतिशतमा पुग्यो । इजिआरपीमा १ देखि ३ कक्षाका विद्यार्थीको पठनप्रवाह प्रतिमिनेट ४५ शब्द शुद्धसँग पढ्न र ८० प्रतिशत बुझ्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाली पहिलो भाषा हुने विद्यार्थीमा कक्षा १ मा ५.४, दुईमा ८.७ र तीनमा १२.८ पुगेको देखिन्छ । यस्तै, नेपाली पहिलो भाषा नहुने विद्यार्थीको भने प्रतिमिनेट शुद्ध पढ्नसक्ने पठनप्रवाह कक्षा १ मा १.२, दुईमा १.४ र तीनमा ४.५ मात्र रहेको नतिजा छ ।
उनले अब उप्रान्त जिल्ला थप्नेभन्दा स्थानीय तहकै लागि इजिआरपी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।